Qabeenyi bineensa bosonaa Itoophiyaa malirra jira? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, EWCA
Itoophiyaan biyyoota addunyaa qabeenyaa uumamaa heddu qaban 25 keessaa tokko ta'ushee, oggeeyyoon dame kanaa ni dubbatu.
Dr. Asaffaa Mabiraatee barsiisaafi qorataan dame qabeenya bineensota bosoonaa Itoophiyaa BBC'tti akka himanitti, qabeenya bineensota bosonaa addunyaarra jiran keessaa akaakuun hoosistootaa 36, simbirroota 18 fi kanneen lafarra loo'an 15 Itoohpiyaatti qofatti argamu.
''Bara 1960 keessa da'oon bineensota bosonaa badiinsa oolchuuf tajaajilan shan qofaa kan turan yoo ta'u, walakkaa jaarraan booda garuu gara 27 tti guddataniiru,'' jedhu Dr. Assaffaan.
Kana malees, bineensota bosonaa kunuunsuuf bal'ina waliigala biyyattii keessaa dhibbentaa 18.4 kan ta'u paarkoota dabalatee da'oo bineensota bosonaaf kan daangeffameedha.
Haa ta'u malee, qabeenyi qabeenya boosoonaa haala yaachisaa ta'een hir'achaa jira, jedhu Dr. Asaffaan. Naannoolee biyyattii da'oofi paarkiiwwan akaakuun bineensoota bosoonaa hedduun keessatti argaman keessaa tokko Naannoo Oromiyaa ta'u ragaaleen ni mul'isu.
Qabeenyi bineensa bosonaa Oromiyaa maalirra jira?
''Akaakuun bineensa bosonaa 320 biyyattii keessatti argaman keessaa %80 kan ta'an naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Isaan keessaas akka addunyaatti akaakuun 28 Oromiyaa keessatti qofa kan argamanidha,'' oggeessi dhaabbata bosonaafi bineensa bosonaa naannichaa.
Dhaabbatichatti Daarekitara Misooma Qabeenya Bineensa Bosonaa Obbo Cammaree Zawudee akka jedhanitti, akaakuu bineensa bosoonaa naannichatti argaman keessa Gadamsa Baddaa (mountain Nyala), Qamaleen Baaleefi kan akka addunyaatti sanyiin ishee addunyaarraa baduuf jedhameefi irratti hojjetamaa jiru Jeedalli Diimaan Oromiyaatti qofa argamu.
Kana malees kan akka Qorkee, borofaafi akaakuuwwan simbirroo paarkii Booranaa Oromiyaa keessatti qofa kan argamaniifi kan daawwatoota hawwatan akka ta'e dubbatu Obbo Cammareen.
Naannichatti bakkawwan qabeenyi bineensota bosonaafi miidhagina uumamaa qaban 26 ta'an daangeffamuufi hojiin eegumsaafi misoomaas taasifamaa jira jedhu.
Lafa waliigala Oromiyaan qabdu keessaa kan qabeenya bineessa bosonaafi paarkiiwwaniif daangeffame %1.8 kan ture amma gara %3.2 ol guddateera. Kanaaf, kunuunsi bineeensota bosonaaf taasifamuufi galiin irraa argamus waggaa waggaan dabalaa jira, jedhu Obbo Cammareen.
Paarkota haarawaa Oromiyaa keessatti hundeeffaman keessaa Paarkii Biyyoolessaa Dhaatii Walal Wallaggaa Lixaafi Qeellam Wallaggatti argamuu, Booranaafi Gaarreewwan Arsii akkasumas da'oon bineessa bosonaa Dirree Liiban kanneen dhiyeenya qabeenya misooma bosonaa kunuunsuun hawwata turiizimiif akka oolan taasifaman keessaa ta'u dubbatu, Daayirektarichi.
Madda suuraa, EWCA facebook
Fakkeenyaaf, Paarkiin Dhaatii Walala akaakuu bineensota bosonaa hedduu kan qabuudha. Paarkiin kun bishaan gurguddoo, karra gafarsaa kumaatamaan lakkaa'amaniifi roobii hedduu qabuun baayyee haawwatamaa ta'u himu Obbo Cammareen.
Paarkiiwwan Gaarreen Arsiis miidhagina addaa kan qabaniidha. Paarkiin Biyyoolessaa Booranaa ammoo addatti bakka daawwannaa simbiroota waan ta'eef madda turiizimii ta'aa jira jedhu.
Kaayyoo hundeeffama paarkii Biyaalessaa Booranaa yeroo dubbatan Obbo Cammareen, akaakuwwan simbirroota akka addunyaatti Oromiyaa keessatti qofa argaman kunuunsuun dhalootatti dabarsuufi misoomsuuf yaadameeti jedhu.
Qabeenya guddaa kana hanga barbaadame hojiirra akka hin oolleef hanqinoota lamatu jiru jedhu Obbo Cammareen. Isaanis, rakkoo bu'uuraalee misoomaafi qabeenya kana sirriitti beeksisuu dhabuuti.
Maaltu eenyurraa eegama?
"Waanti nurraa eegamu qabeenya kana qabeenyummaa isaa hubanne kunuunsaafi misooma barbaachisuuf gochuudha. Kunis tokkooffaa hambaa sadarkaa addunyaatti ittiin bekamnudhaa. Lammaffaa kan dhalootarraa dhalootatti darbuu danda'aniidha. Sadaffaa, madda galii guddaa ta'uun hawaas-dinagdee keessatti ga'ee guddaa qabaachuu danda'a," jechuudha.
"Qabeenyi kun qabeenya hunda keenyaati. Kanaaf, hojiin kunuunsaafi misooma qabeenya kanaa deggersa qaama hundaa barbaada," kan jedhan Obbo Cammareen, gama saayinsaawaa ta'een qoratamanii adda baasuufi da'oo bineensa bosonaa ta'an yeroo ammaa kanatti giddu-gala qorannoo taasisuu barbaachisa jedhaniiru.
Ogeessonni sadarkaa addunyaatti jiran caalmaatti qorannoo gaadi-fageenyaan taasisuun haala bineensonni bosonaa irra jiran sirriitti beekuun barbaachisaadha kan jedhan Daarektarichi, ga'ee mootummaan alatti abbootiin qabeenyaas karaa adda addaatiin qabeenya bineensota bosonaa kunuunsuufi misoomsu keessatti ga'ee isaanii ba'uu akka qaban dhaamaniiru.